Atambaro ireo rakitra PDF marobe ao anaty antontan-taratasy tokana | Avy amin'ny mac aho
Preview dia mamela anao hanambatra tahirin-kevitra PDF
Ny rafitra fiasan'ny Mac dia miavaka amin'ny hetsika maro. Anisan'ny tombotsoan'ny Mac OS X ny fanasongadiko iray hafa: miaraka amin'ireo rindranasa izay ananantsika ho fenitra dia afaka manao ny zava-drehetra isika. Tsy ireo izay fantatra amin'ny anarana hoe Safari, Mail, Kalandrie, Contact sns fotsiny no tiako horesahina, fa koa ireo rindranasa hafa izay manampy antsika amin'ny asantsika isan'andro hanao tatitra, na fanovana ireo. Androany aho hiresaka momba ny fijerena Preview.
Matetika, Te-hanangona ao anaty antontan-taratasy iray aho, ny fampahalalana rehetra ananako momba ny asa iray, ny fangatahana, ny asa, sns. Izany hoe, momba ny lohahevitra iray, azoko atao: mailaka, miaraka amin'ny fonosana tsirairay avy, antontan-taratasy, takelaka ary antontan-taratasy sasany efa mihidy ao amin'ny PDF. Ahoana no fomba fampiraisana an'izany rehetra izany?
Misy fomba maromaro hanambarana rakitra, Ny hevitro no mahomby indrindra ho ahy.
1º.- Sokafy ny antontan-taratasy PDF roa miaraka amin'ny PreviewNy torohevitro dia apetraho eo ankavia ny iray ary ny iray eo ankavanan'ny efijery, samy manana 50% amin'izany.
Faha-2.- Open Thumbnails: ho hitanao io bokotra io amin'ny bokotra voalohany amin'ny baraovana na amin'ny hitsin-dàlana fitendry: ⌥⌘2
3º.- Mariho fa amin'ny zoro ambony an'ny kely voalohany dia misy zana-tsipika. Amin'ny alàlan'ny fanindriana azy dia azontsika atao ny manao fifanarahana na manitatra, izany hoe ny pejy voalohany ihany no hitantsika na afaka mahita azy rehetra isika. (raha tsy manana takelaka iray fotsiny ny antotan-taratasinay dia tsy hitranga izany) Raha te-hamindra ny antontan-taratasy iray manontolo ianao dia avelao hirodana izy ary raha te-hanetsika ravina iray na maromaro ianao dia ampitaro.
Faha-4.- Safidio ny takelaka tianao hapindra (hiantsoantsika azy io ny loharano loharano). Tsindrio ilay fizarana ary sintomy izy amin'ny toerana itiavantsika azy hiseho ao amin'ny antontan-taratasintsika farany (hiantsoana azy io hoe antontan-taratasy haleha). Zava-dehibe, Amin'ny faran'ny takelaka farany an'ny antontan-taratasy haleha dia ho hitanao a bara. Zava-dehibe ny fampahalalana momba ny antontan-taratasy ahatongavana dia eo ambonin'ity bara ity, satria ny bara dia manondro ny faran'ny rakitra, noho izany izay ananantsika eto ambanin'ny bara dia antontan-taratasy hafa.
Faha-5.- Amboary ny filaharan'ny lambam-pandriana efa ao amin'ny antontan-taratasy Destination, manindry sy misintona miakatra na midina. Ho hitanao ny fomba fivezivezin'ny takelaka hanomezana toerana ilay takelaka tiantsika hafindra.
6.- Mety hitranga izany omeo anarana ny rakitra vaovao (antontan-taratasinay). Mba hanaovana izany, toy ny fisie Mac OS X dia kitiho ny anarana eo an-tampon'ny baraovana ary soloina araka izay itiavantsika azy.
7º.- Farany, tahirizo ny antontan-taratasy na manondrana azy amin'ny PDF avy amin'ny menio fisie.
Fantatrao ve ny momba io safidy Preview io? Mampiasa fomba hafa ve ianao hanovana PDF? Ampahafantaro anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Preview dia mamela anao hanambatra tahirin-kevitra PDF
Ny fampiharana Telegram ho an'ny Mac dia navaozina ho amin'ny andiany 2.19
Ahoana ny fandoroana CD amin'ny Mac, macOS Sierra betas, CarPlay, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac